http://www.fos.su.se/~arnold/travel/asia2001/myanmar_flag.gif' rel='shortcut icon'/> Hlaing Bwer Aung
Hlaing Bwer Aung
Hlaing Bwer Aung စာအုပ်စင်
Posted by ပေါက်ကရ at 7:19 PM No comments:
Unlock Huawei Bootloader using DC-Unlocker for free
Huawei has great Android smartphone atadecent price.Huawei smartphone are running on EMUI ROM on top of Android operating system.To stop the user from making some deep changes into the smartphone Huawei has locked down the bootloader of their smartphone.A bootloader is some predefined settings that run when you power on your smartphone.It will not allow you to make any changes into the operating system of your smartphone for example- rooting your smartphone or flashing custom ROM etc.So if you want to make some changes into your smartphone then you have to unlock the bootloader of your Huawei smartphone.
There is an official method to unlock the bootloader of Huawei smartphone.But if you are failed to unlock the bootloader with the help of this method then you need to unlock the bootloader using an alternative method.One of the best methods to unlock the bootloader of Huawei smartphone is using DC-Unlocker.But you have to pay in order to unlock the bootloader of your Huawei device.Here we are going to show you how you can unlock the bootloader of your Huawei smartphone using DC-Unlocker for free.Unlocking bootloader may damage your smartphone and wipe all data.So do it at your own risk we are not responsible for any damage
Step to unlock Bootloader of Huawei device
Install the Huawei USB driver into your computer.
Install the DC-Unlocker software into your computer.
Enter your smartphone into manufacture mode by dialing *#*#2846579#*#* and then go to Project Menu>>Background Settings>>USB Ports Settings>>Manufacture Mode.
Open the DC-Unlocker tool into your computer.
Select "Huawei Phones" and "Auto Detect Model" from the drop down in DC-Unlocker.
Click on magnifying glass icon to search the model number of your smartphone.
Click on "Buy Credit" and set up DC-Unlocker account.
Now go to This Link on Facebook and click on Get free credits to get free credit for you account.
Now click on Server section and enter your account detail again.
Click on Unlocking button and select Read bootloader code.
Copy the unlock code provided by DC-Unlocker.
Enable USB Debugging and OEM Unlock by going to Setytings>>Developer options.
Install the Minimal ADB and Fastboot Setup and open the folder where you install it.
Press Shft+Right click and select the Open command window here.
Enter "adb reboot bootloader" to boot your smartphone into bootloader mode.
Enter "fastboot oem unlock Unlock-Code-Here" to unlock the bootloader of your smartphone.Change "Unlock-Code-Here" with unlock code that you get from DC-Unlocker.
That's it! The bootloader of your Huawei device is unlocked and it is ready to tweak.
Posted by ပေါက်ကရ at 1:03 AM No comments:
Huawei launched Honor 8 in July 2016.Honor 8 isahigh-end Android smartphone with Kirin 950 chipset.It has 5.2 inches 1080p display and dual 12 cameras at back.Honor 8 is running on Huawei's own EMUI ROM on top of Android Marshmallow.Developers released TWRP recovery for Honor 8 which isagreat news if you want to root your Honor 8.If you want to get root access on your Honor 8 and want to flash custom ROM on your Honor 8 then you needacustom recovery like TWRP.
Here we are going to show you how to flash TWRP recovery on Honor 8.We are also going to show you how to root Honor 8.So if you want to root your Honor 8 and install TWRP recovery on it then follow the below guide.You will need to unlock the bootloader of your smartphone before flashing TWRP and grant root access.First, You will need to flash TWRP and then flash the SuperSU file via TWRP to root your Honor 8.
ADB+TWRP Kit (For FRD-L09 or FRD-L19)
ADB+TWRP Kit(For FRD-AL00 or FRD-AL10)
Step to flash TWRP and Root Honor 8
First, you need to Unlock the bootloader of your Honor 8.
Make sure that USB Driver for your smartphone is installed on your computer.
Move SuperSU.zip file into your Honor 8.
Unzip the AD+TWRP Kit into your computer and open the folder where you unzip it.
In ADB+TWRP folder Press Shift and Right click and select Open command window here to open ADB command window.
In command window type "adb reboot bootloader" and wait for your Honor 8 to boot into bootloader mode.
Type "fastboot flash twrp.img" to install TWRP recovery on your Honor 8.
Now, Type "adb reboot recovery" to boot your device into recovery mode.
In recovery mode tap on Install and select the SuperSU.zip file.
That's it! your Honor 8 is rooted.
Posted by ပေါက်ကရ at 12:52 AM No comments:
Password တွေရဲ့ အဓိပါယ် နဲ့ လုံခြုံအောင်ကာကွယ်နည်းများ
Posted by ပေါက်ကရ at 12:11 PM No comments:
Rooting အကြောင်းကို အသေးစိတ် ရှင်းပြထားတာကို pdf ဖိုင်နဲ့ ရေးပေးထားတာ
ရှိပါတယ်၊ အောက်က လင့်မှာ ဒေါင်းလုပ်ရယူပါ၊
Posted by ပေါက်ကရ at 8:20 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Mobile Network တွေအကြောင်းကို မသိသေးတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် အနည်းအကျဉ်း လေ့လာမိသလောက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ပြောချင်တာကတော့ Mobile Network လို့ခေါ်တယ်ဆိုမှတော့ Mobile Phone စနစ်ကို အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ထားလို့ပေါ့နော်။ ကျွန်တော် လေ့လာမိသလောက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Mobile စနစ်က လောလောဆယ် (၆) မျိုး ရှိနေပါတယ်။
၂။ ခြင်းဖုန်းလို့ လူသိများတဲ့ CDMA
၅။ CDMA 450 MHz (ကမ်းရိုးတန်းဖုန်း)
၆။ CDMA 800 MHz ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။
အဲဒီထဲကမှ ဒီနေ့ နာမည်အကြီးဆုံးနဲ့ Standard အရှိဆုံးကတော့ GSM Network စနစ်ပေါ့နော်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်လောက်က ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ Analog Cellular System ဆိုပြီးတော့ Local အနေနဲ့ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ Local ဆိုတာက ပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့ ကွန်ယက်တွေ အတွင်းကို ၀င်ရောက် ပြောဆိုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
ဥပမာ - အင်္ဂလန်ဆို အင်္ဂလန် နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲ ပြောလို့ ရပါတယ်။ တခြား အမေရိက တို့ ပြင်သစ်တို့ရဲ့ Network တွေထဲကို ၀င်ရောက် ပြောဆိုလို့ မရသေးပါဘူး။ အဲဒီလိုနဲ့ ၁၉၈၂ ခုနှစ်လောက်မှာ ဥရောပနိုင်ငံကြီးတွေ စုစည်းပြီးတော့ Mobile Network အတွက် စံသက်မှတ်ချက် တစ်ခုထားနိုင်ဖို့ တိုင်ပင်ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် Group Special Mobile လို့ခေါ်တဲ့ GSM ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။
၁၉၈၇ ခုနှစ်လောက်မှာတော့ တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ ဆက်သွယ်ဖို့ရန် တူညီတဲ့ Network တစ်ခုအတွက် နိုင်ငံပေါင်း ၁၃ နိုင်ငံ ပေါင်းပြီး Cellular Phone Network ဆိုတဲ့ ကွန်ယက် တစ်ခုကို သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ သုံးနေကြတဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး အအောင်မြင်ဆုံး Standard အရှိဆုံး GSM Network ကို အဲဒီလိုနဲ့ စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့ ဥရောပ နိုင်ငံ တော်တော်များများမှာ နေရာ ကန့်သတ်ချက် မရှိပဲ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ ကန့်သတ်ချက် မရှိတော့ပဲ လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုနိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း GSM ရဲ့ မူလ အခေါ်အဝေါ် Group Special Mobile ကို ပိုမို ကြီးမားတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအဖြစ် သက်ရောက်စေရန်အတွက် Global System for Mobile Telecommunications ဆိုပြီး ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။
GSM Network မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ Frequency Rate အနေနဲ့ကတော့ 850MHz ၊ 900 MHz ၊ 1800 MHz ၊ 1900 MHz ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ လူဦးရေ သိပ်သည်း ထူထပ်တဲ့ မြို့ပြနိုင်ငံကြီးတွေမှာ ဆိုရင်တော့ Frequency အနိမ့်ပိုင်းတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံ တော်တော်များများနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆို အခု လက်ရှိ 900 MHz ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ တောင်အမေရိကတိုက် ၊ မြောက်အမေရိကတိုက် နဲ့ အာရပ်နိုင်ငံတို့လို ကွင်းပြင် ၊ တောင်တန်း ၊ သစ်တောတွေ ထူထပ်ပေါများတဲ့ နိုင်ငံမျိုးတွေ ၊ လူနေကျဲပါးဝေးလံတဲ့ ဒေသမျိုးတွေ ဆိုရင်တော့ လိုင်းအားပြင်းတဲ့ 1800 MHz ၊ 1900 MHz တို့ကို အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီလို Frequency အမြင့်ပိုင်းတွေကို လူဦးရေ သိပ်သည်းထူထပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ တခြားသော Radio Network ကို ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖြစ်စေတဲ့ အတွက် အသုံးမပြုကြပါဘူး။
WCDMA ဆိုတာက GSM ရဲ့ အဆင့်မြင့် system တစ်ခုပါ။ သူ့ရဲ့ Frequency Rate ဟာလဲ 900 MHz နဲ့ အလုပ်လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ လူတွေ ပြောပြောနေတဲ့ 3G (Third Generation) ပေါ့နော်။ ကိုရီးယားမှာတော့ 4G အထိ အပြည့်အ၀ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး TV Channel တွေပါ Mobile Phone ပေါ်မှာ ကြည့်နိုင်နေပါပြီ။
တကယ်တမ်း ဆိုရင်တော့ 3G စနစ် အမှန်အကန် တစ်ခုက Video Configuration စနစ်ကို ကောင်းကောင်းကြီး support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လဲ 1000 MHz နီးပါးနဲ့ သာသာယာသာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သိတာတော့ WCDMA ရဲ့ ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ အစစ်အမှန်မှာ 3gpp (Third Generation Partnership Project) လို့ ခေါ်ပါတယ်။
CDMA လို့ ခေါ်ကြတဲ့ Code Division Multiple Access ဆိုတာဟာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်လောက်ကမှ ခေတ်စားလာတဲ့ နည်းပညာ တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာဆို CDMA 450 MHz နဲ့ CDMA 800 MHz ဆိုပြီး လူသိများပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့ နိုင်ငံတွေဆိုတာကတော့ တော်တော်ကို နည်းပါးနေပါပြီဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာတော့ လက်ရှိ အသုံးပြုနေဆဲပါပဲ။ CDMA 800 MHz လိုင်းတွေဟာ ဆိုရင်တော့ လိုင်းမှာ အမြဲကြည်လင်နေပြီးတော့ ဖုန်းလိုင်း ပြတ်တောက်တယ်ဆိုတာ အတော် ဖြစ်ခဲပါတယ်။ သူက Frequency 800 MHz နဲ့ 900 MHz အတွင်းမှာ သုံးစွဲနေပါတယ်။
CDMA ဖုန်းတွေဟာ ပြင်းထန်တဲ့ လိုင်းဆွဲအားကို အမြဲရှာဖွေ အသုံးပြုနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖုန်း Battery သက်တမ်းကလဲ အကုန်မြန်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ CDMA ဖုန်းတွေမှာ ဆိုရင် 450 MHz ကတော့ အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ Uplink 455 နဲ့ Downlink 465 MHz ၀န်းကျင်မှာသာ အသုံးပြုနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Data သယ်ပို့နိုင်စွမ်း မရှိပါဘူး။ CDMA 800 MHz ဖုန်းတွေကို အင်တာနက် အသုံးပြုလိုတယ် ဆိုရင်တော့ EVDO (Evolution Data Optimized) စနစ်ကို လျှောက်ထားပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Posted by ပေါက်ကရ at 7:22 AM No comments:
Computer Hard Disk မှာ Scan Disk (or) Check Disk လုပ်ရခြင်းအကြောင်း
Scan Disk ဆိုတာကတော့ Hard Disk အတွင်းမှာရှိတဲ့ Folder တွေ၊ File တွေနဲ့ Free Space တွေ၊ Lost Cluster စသည်များကို စစ်ဆေးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူ ကြုံဖူးမလားတော့ မသိဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ ကွန်ပျူတာ သုံးနေရင်းနဲ့ မီးပျက်သွားတဲ့အခါမှာ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Program နဲ့ File တွေမှာ Error ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
အဲဒီအခါမျိုးမှာ မီးပြန်လာလို့ ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Windows မတက်ခင် Auto Scan Disk (Chkdsk@Check Disk) စစ်ပေးပါတယ်။ Windows က Auto လုပ်ပေးတာပါ။ ကျွန်တော်ဆို မစောင့် နိုင်လို့ ကျော်ကျော်ပစ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဒီ Error တွေကို ဖြေရှင်းလို့ မရတော့ဘူးဗျ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို ပုံမှန် တစ်လ တစ်ခါလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် Scan Disk စစ်သင့်ပါတယ်။
Scan Disk ဆိုတာ Virus စစ်တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ တစ်ချို့က Computer Virus စစ်တာနဲ့ မှားတက် ကြတယ်။
Scan Disk စစ်မယ်ဆိုရင် Start > All Programs > Accessories > System Tools အောက် ကမှ Scan Disk (In Windows XP) ကို Click နှိပ်ဝင်ပြီး စစ်ယုံပါပဲ။ Scan Disk မှာ မှStandard နဲ့ Thoro ugh ဆိုပြီး အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Standard ကတော့ Folder, File, Free Space တွေမှာရှိတဲ့ Error တွေကို ဖြေရှင်း ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ Standard နဲ့ပဲRun တာကောင်းပါတယ်။ Automatically Fixed Error ကို လည်း On ထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါမှ Error တွေ့တဲ့အခါ အလိုအလျှောက်ဖြေရှင်း သွားမှာ ပေါ့။ Standard ကို Run ရင်တော့ ၁၀ မိနစ်၊ ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲ ကြာတယ်ဗျ။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ့်ရဲ့ Hard Disk က အချိန်ကြာနေလို့၊ Bad Sector တွေရှိနေပြီဆိုရင်တော့Thorough run ဖို့ လို ပါတယ်။ သူကတော့ Hard Disk ရဲ့ မျက်နှာပြင်အထိကိုပါ စစ်ပေးပါတယ်။Thorough Run မယ် ဆိုရင်တော့ Bad Sector မှာရှိတဲ့ Data တွေကို ကောင်းတဲ့ Sector တွေစီကို ပို့ပေးပြီး အဲဒီနေရာကို Data ထပ်သိမ်းလို့ မရအောင် သက်မှတ်ပေးပါတယ်။ Thorough ကိုRun မယ်ဆိုရင်တော့ နာရီနဲ့ ချီပြီး ကြာပါလိမ့်မယ်။ ကွန်ပျူတာ ကို ဘာအလုပ်မှ မခိုင်းတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Windows7မှာဆိုရင်တော့ Computer မှာ ကိုယ်စစ်ချင်တဲ့ Hard Disk Partition (Eg: Local Disk (D:) ကို Right Click နှိပ်ပြီး အောက်ဆုံးက Properties ကို နှိပ်ပါ။ Properties box ကျလာရင် Tools အောက်က Chek Now ကို Click နှိပ်ပြီး Scan Disk ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Posted by ပေါက်ကရ at 7:02 AM No comments:
Huawei Honor 3C 4G(H30-L02) သမားများအတွက် Android 4.4.2 Official Firmwares တင်ရအောင်
★ H30-L02,Android 4.4,Emotion UI,V100R001CHNC00B126★
★ H30-L02,Android 4.4,Emotion UI,V100R001CHNC00B128★
★ H30-L02,Android 4.4,Emotion UI,V100R001CHNC00B130★
★ H30-L02,Android 4.4,Emotion UI,V100R001CHNC17B128★
★ H30-L02,Android 4.4,Emotion UI,V100R001CHNC17B130★
Down ပြီးရင် dload ဆိုတဲ့ ဖိုင် တစ်ခုလုံးကို sd ကဒ်ထဲထည့် ပါဝါပိတ် vol up ရယ် vol down ရက် power ရယ် ကို တစ်ခါတည်းတွဲနှိပ်လိုက်သူ့ ဘာသူ firmware ရေးသွားလိုက်မယ်။5 မိနစ်လောက်တော့ကြာမယ်။
Posted by ပေါက်ကရ at 2:13 PM No comments:
ကဲကိုယ်ရဲ့ ကောင်မလေး PC ပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်း PC ပဲ ဖြစ်ဖြစ်စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်။ ပထမဆုံး အနေဖြင့် မိမိ ကောင်မလေးအတွက် I love you Virus ကို ဖန်းတီးမယ်။
Setp (1) Start > Run (or ) Window Key + R ထဲတွင် Notepad လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး Notepad ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ Setp (2) အောက်က Code လေးတွေကို ထည့်လိုက်ပါ။ @echo off :abc msg * I love You Darling !! mmuuaah! goto abc .bat
Setp (3) File > Save (or) Ctrl+S ဖြင့် သိမ်းလိုက်ပါ။ သိမ်းတဲ့ နေရာတွင် ဖိုင်အမည်ကို any (ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဖိုင်နာမည်) . bat ဖိုင်ဖြင့် သိမ်းပါ။ (kozin.bat) ပြီးရင် အဲဒီ ဖိုင်လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ အောက်ပါ ပုံအတိုင်းပေါ်လာပါမည် အပေါ်က Code ထဲက msg * I love You Darling !! ထိုစာကြောင်းထဲက Darling နေရာတွင် မိမိ ကောင်မလေးနာမည် ရေးပါ။ ဒါဆို Massage တွင် မိမိကောင်မလေး နာမည် ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီ Virus ကို run လိုက်ခြင်းအားဖြင့် Computer Harm ခြင်း မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကွန်ပျူတာ Desktop ပေါ်တွင် ခဏခဏ ပေါ်ပြီး နှောင့်ယှက် တာပဲရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အေးအေးဆေးဆေးအလွယ်တကူ စမ်းသက်နိုင်ပါတယ်။ မိမိ ကောင်မလေးက လည်း ကွန်ပျူတာသုံးတိုင်း သတိရနေမှာပါ။ (ဆဲခြင်လို့ဖြစ်မယ်)
Posted by ပေါက်ကရ at 12:57 PM No comments:
ဖုန်း Lock ကျလျှင်
မြန်မာလူမျိုးအများစုက ဖုန်းသာကိုင်တာပါ။ သေသေချာချာတော့မလေ့လာပါဖူး... ဒါပေမယ့်လေ့လာလို့၇အောင် အလိမ်မခံ၇အောင် ဒါလေးတင်ပေးတာပါ။ အခုဖုန်းတွေမှာ ဖြစ်တက်တာက (ဖုန်းလော့နဲ့ (SIM)ကတ်လော့တွေမှားချမိတာပါ) အဲ့အတွက်တော့မပူပါနဲ့တော့။ ကျနော်ရှင်းပြပါမယ်။ အစတုန်းကဆက်သွယ်ရေးကနေ ဖွင့်၇င်ပိုက်ဆံတောင်းပါတယ်။ တစ်ချို့ဆို ၅၀၀၀၀ လောက် ပေးရတယ်။
ဒါတွေမဖြစ်တော့ပေမယ့် သူတို့ကနောက်ထွက်တဲ့ (SIM)ကတ်တွေမှာ နံပတ်တွေပါမလာတော့ဖူး။ အ၇င်ဝယ်ထားတဲ့ဆင်းကတ်ရဲ့ (ချိုးတဲ့ကတ်အကြီးပေါ်မှာ)တွေမှာ နံပတ်လေးတွေပါတယ်။ အဲ့နံပတ်တွေက (PUK-xxxxxxxxx)လို့ရေးထားတယ်။ အဲတာလေးတွေရိုက်လိုက်၇င်ပွင့်တယ်။ သူက၃ခါရိုက်၇တယ် ကိုယ်ကနံပတ် မမှတ်မိတော့၇င် ပထမတစ်ခါမှာ ၁၂၃၄၅ လို့ရိုက်လိုက်၇င် (PIN)ကနေ (PUK)လို့ ပြောင်းသွားပြီးမှ ၂ ခါနဲ့၃ ခါ မြောက်ကျ၇င် (PUK) နံပတ်ကိုရိုက်လိုက် အဲတာဆိုဖုန်းပွင့်သွားလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့မှ settting ထဲဝင်ပြီး (phone lock (or)security lock)ကိုဝင်ပြီး (SIM)(PIN 1)ကိုထပ်ဝင်ပြီးဖြေပေးပြီး(OFF)လိုက်မှ ပြီးတာနော်..။ ဒါဆိုရင်OK ပြီပေါ့ဗျာ..။အဆင်ပြေကြပါစေ..။ ပြန်လည်မျှဝေသည်။
Posted by ပေါက်ကရ at 12:51 PM No comments:
ကွန်ပျူတာ password မေ့လျှင်
ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာလေးမှာ သူများမသိစေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ လေးတွေရှိလို့ Passwords နဲ့ပိတ်ထားကာမှ အချိန်ကြာလာ သောအခါ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ နဲ့မေ့သွားတတ်ပါတယ်။ ထိုအခါ ကိုယ့်အတတ်နဲ့ကိုယ် ကွိုင်တက်တော့တာပါဘဲဗျာ..။ ထိုအဖြစ်မျိုးကြုံတွေ့နေရသူတွေအတွက်ကော ၊ Passwords ဖွင့်နည်းသိချင်သူတွေအတွက် နည်းလမ်းလေးများဖြစ်နိုင်သလောက် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်..။ ◘◘နည်းလမ်း(၁)◘◘ ကွန်ပျူတာစသုံးတဲ့အခါ သို့မဟုတ် ၀င်းဒိုးတင်တဲ့အခါတွေမှာ Username မဖြစ်မနေပေးခဲ့ရပါတယ်။ ထိုအခါ ကွန်ပျူတာမှာ Username နဲ့ Administrator ဆိုပြီးအကောင့်နှစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်။ ဥပမာ Username မှာ MgMg လို့ပေးခဲ့ရင် MgMg နဲ့အတူ Administratorဆိုတဲ့အကောင့်က ပူးတွဲပါရှိလာပါတယ်။ မိတ်ဆွေက MgMg မှာ passwords ပေးထားခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် မေ့သွားပြီဆိုလျှင် ကွန်ပျူတာကို Restart ချလိုက်ပါ။ Restart ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် F8 ဆိုတဲ့ Key ကိုအဆက်မပြတ်နှိပ်ပေးထားပါ။ နှိပ်ပါဟုဆိုရာတွင် ဖိထားခိုင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထိုအခါ Safe Mode မြင်ကွင်းကိုရောက်ရှိသွားပါမယ်။ Safe Mode ဆိုတဲ့စာသားနေရာကို Arrow Key နဲ့ရွှေ့ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
အချိန်အနည်းငယ်တော့စောင့်ရပါမယ်။ ထိုအခါ ကွန်ပျူတာသည် Safe Mode မြင်ကွင်းနဲ့ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။၄င်းတွင် Administrator နှင့်Username ( MgMg) ကိုတွေ့ရပါမယ်။ Username ( MgMg) သည် passwords မေ့နေသူရဲ့အကောင့်ပါ။ယခု Administrator အကောင့်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ၊ Safe Mode နဲ့ဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် MgMg အကောင့်ကိုတော့ဝင်လို့ရမည်မဟုတ်ပါ။ Start> Control Panel မှ User Accounts ( icon ) ကို ကလစ်လုပ်ဖွင့်ပါ။ User Account (box) ပေါ်လာပါမယ်။ ၄င်းတွင် "or pick an account to change" လို့တွေ့ရပါမယ်။ ထိုအခါMgMg ဆိုတဲ့အကောင့်ကို ကလစ်လုပ်လို့ရနိုင်ပါပြီ။ထိုအခါနောက်ထပ်မြင်ကွင်း တစ်ခုပေါ်လာပါမယ်။ ၄င်းတွင် "What do you want to change about account လို့တွေ့ရပါမယ်။ ၄င်းတွင် "Change the password" ကိုရွေးချယ်ပြီး password အသစ်တစ်ခုပေးပါ။ အရင်စဉ်းစားလို့မရတဲ့ password ကို ပင်ပန်းခံမစဉ်းစားပါနဲ့.။မေ့လိုက်ပါ အရင်ကဇာတ်လမ်းလေး…..အဲ..ယောင်လို့.. တကယ်လို့ "Remove the password" ကိုရွေးရင် ဘာpassword မှထည့်စရာမလိုတော့ဘဲ ကွန်ပျူတာပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ "Typeanew Password" မှာ passwords အသစ်ထည့်ပေးပါ။ မထည့်ချင်လဲ ဒီအတိုင်းထားပါ။ Change password ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ ကွန်ပျူတာကို ပုံမှန်အတိုင်း Restart လုပ်ပါ။ အကောင့်မှာ password တောင်းရင်လဲ ပတ်ဝေါ့ ပေးပြီးဝင်နိုင် ပါတယ်။ မတောင်းရင်လဲ ဒီအတိုင်းဘဲ ပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်။ နည်းလမ်း(၂)◘◘ ကွန်ပျူတာမှာ အခြားသူတစ်ဦးဦးက၀င်လို့ရရင် (အခြား User ရှိရင် သူ့အနေနဲ့ဝင်ပါ)။ပထမနည်းအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ◘◘နည်းလမ်း(၃)◘◘ ယခုနည်းတွင် ကွန်ပျူတာရဲ့ CD Drive မှာ ၀င်းဒိုးစီဒီကိုထည့်ထားပါ။ BIOS သို့ဝင်ပြီးFirst Boot ကို CD-ROM သို့ပြောင်းပါ။ ကွန်ပျူတာကို ပြန် Restart လုပ်ပါ။ ကွန်ပျူတာ ပြန်ပွင့်တာနဲ့Press any Key to boot from CD ဆိုတဲ့စာသားပေါ်လာတာနှင့် တစ်ပြိုင်နက် ကီးခလုပ်တစ်ခုခုကို နှိပ် လိုက်ပါ။ Screen ကိုသေသေချာချာကြည့်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ ညွှန်ကြားချက်များ အတိုင်း သေသေချာချာပြုလုပ်ပါ။ ဥပမာ - Licensing Agreement ပေါ်ရင် F8 ကီးကိုနှိပ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင် To set up Windows XP … To repairaWindows XP..လို့ပေါ်လာရင် (R=Repair) ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။ R ကီးကိုနှိပ်ပါ။ ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်မှုများကိုကြည့်နေပါ။ ၀င်းဒိုးစ် reboot တစ်ချက်ပြန်ဖြစ်ရင် မည့်သည့်ကီးကိုမျှ ၀င်မနှိပ်ပါနဲ့။ ဆိုလိုတာက " Press any Key to boot from CD" ဆိုပြီးပြန်ပေါ်ရင် ကီးခလုပ်ကိုမနှိပ်ပါနဲ့။ အလိုလို install လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။မြင်ကွင်းဘယ်ဘက် အောက်ခြေကို သတိပြုကြည့်ပါ။ အဲဒီမှာ "Installing Device" progress bar ဆိုတာပေါ်ရင် "Shift+F10" ကီးများကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ၄င်းသည် အဓိကပြင်ရမယ့် နေရာဖြစ်ပါတယ်။Command console ပွင့်လာပြီး အဲဒီမှာပြင်ရပါ့မယ်။ "NUSRMGR.CPL" လို့၇ိုက်ထည့်ပြီး Enter ကီးကိုနှိပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ User Account (box) ကိုမြင်ရပါမယ်။ ၄င်းတွင် password ကိုပြောင်းလိုကပြောင်း.. ဖယ်လိုက ဖယ်ထုတ်နိုင်ပါပြီ။ တကယ်လို့ password အသစ် မပေးချင်ရင် "Control user-passwords2" လို့ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ မြင်ကွင်းများကို ပိတ်၊ command box ကနေထွက်ပြီး Repair လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လုပ်ပါ။ လုပ်ငန်းအားလုံးပြီးရင် ကွန်ပျူတာကို သုံးနိုင်ပါပြီ..။ ပြန်လည်မျှဝေသည်။
Posted by ပေါက်ကရ at 12:44 PM No comments:
iPhone တစ်လုံး၏အချက်အလက်များစစ်ဆေးခြင်း ဒီအပိုင်းမှာတော့ iPhone တစ်လုံးကို ၀ယ်တော့မယ်ဆိုရင် သင်ဝယ်မဲ့ဖုန်းဟာ ဘယ်လိုဖုန်းလဲဆိုတာ သိသင့်ပါတယ်။ နံပါတ်တစ်အနေနဲ့သိသင့်တာကတော့ lock phone လား unlock ဖုန်းလားဆိုတာပါပဲ lock phone တွေဟာ unlock ဖုန်းတွေထက်ဈေးနှုန်း ထက်ဝက်နီးပါး သက်သာလေ့ရှိပါတယ်။ အရည်အသွေးကတော့ ကျမသွားပါဘူး lock ဖုန်းတွေရဲ့  အားနည်းချက်က lock phone ထုတ်တဲ့ကုပ္မဏီနဲ့ စာချုပ် ချုပ်ထားတဲ့ sim card ကလွဲပြီး တခြား sim card သုံးမရတာပဲ ဒီတော့ တန်ဖိုးနည်းတဲ့ lock phone တွေဝယ်ပြီး တခြား sim card နဲ့ သုံးလို့ရအောင် unlock sim နဲ့ဖြစ်စေ software unlock နဲ့ဖြစ်စေ unlock ဖုန်းဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းတွေလည်းရှိတယ်...
အဲလို lock phone တွေကို reset ချတဲ့အခါ unlock လုပ်ထားတာပျက်သွားပြီး lock phone ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့် သင်ဝယ်တုန်းက lock phoneကို unlock လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သင် reset ချမိသည်နှင့် sim card သုံးမရသည့်ပြသနာနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ နောက်အပိုင်းမှာ reset အကြောင်းကိုတင်ပေးမှာမို့ reset အကြောင်း မလေ့လာခင် ဒီအကြောင်းကိုသိသင့်မယ်လို့ထင်တဲ့အတွက် ဒီအပိုင်းမှာတင်ပေးလိုက်တာပါ။ lock phone လား unlock phone လားဘယ်လိုသိမှာလဲ ဒါကတော်ရုံနဲ့ကြည့်လို့ မသိနိုင်ဘူး ဒါကြောင့် iPhone တစ်လုံးရဲ့ အရည်အသွေးအစစ်မှန်ကို စစ်နိုင်ဘို့ Apple က၀န်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။ အရင်ဆုံး သင်ဝယ်ယူမဲ့ဖုန်းရဲ့  IMEI ကိုသိဘို့လိုပါတယ် ဒါကိုကြည့်ဘို့အတွက် iPone setting ထဲဝင်လိုက်ပါ။ Setting->General->About->IMEI မှာကြည့်ပါ နံပါတ် ၁၅ လုံးတွေ့ပါမယ် အဲဒါကိုမှတ်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် အောက်က link ကိုသွားပါ... http://iphoneimei.info/ ပေါ်လာတဲ့ iPhone IMEI ကအကွက်မှာသင့်ဖုန်း၏ IMEI နံပါတ် ၁၅ လုံးကိုဖြည့်ပေးပြီး Enter နှိပ်ပါ မြှားကိုနှိပ်ပေးလည်းရပါတယ်။ နှိပ်ပြီးပါက နမူနာပြထားတဲ့ ပုံထဲကလို သင့်ဖုန်းရဲ့ အချက်အလက် အပြည့်အစုံကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါပြီ... 16GB လား 32GB လား ဖုန်းရဲ့ အရောင်ကအစပြထားပေးပါတယ် ပြီးတော့ အာမခံရှိပါက သက်တန်းဘယ်လောက် ကျန်သေးတယ်ဆိုတာပါ ပြပေးပါတယ် ... နောက်တနည်း Serial number နံပတ်ကိုရှာပီး အောက်ကလင့်မှာ စစ်ကြည့်ပါ Setting- General - About - မှာ တွေ့ နိုင်ပါတယ်။ စစ်ကြည့်လို့ သူတို့ မှတ်တမ်းမှာ မရှိဘူးဆိုရင် အတုဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုတယ် ဒီလင့်ကို နှိပ်ပြီး စစ်ပါ - Apple Product Checker
Posted by ပေါက်ကရ at 11:44 AM No comments:
Hlaing Bwer .apk ကျွန်တော့် Blog apk လေးပါ
ကျွန်တော့် Blog apk လေးပါ
ဒီ apk လေးက online လုပ်ပီး syn ထားရင် ofline မှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်
ဟင်းချက်နည်းတွေဆို ofline လုပ်ပီးလေ့လာလို့ရပါတယ်
Hlaing Bwer .apk
Posted by ပေါက်ကရ at 11:31 AM No comments:
Android APK (11)
Hlaing Bwer Aung စာအုပ်စင် (1)
စကားလိမ် နှင့် ဉာဏ်စမ်းများ
Viber မှာ စတစ်ကာတွေ Free Down မယ် (Lucky Patcher..APK)
မြန်မာလူမျိုးအများစုက ဖုန်းသာကိုင်တာပါ။ သေသေချာချာတော့မလေ့လာပါဖူး... ဒါပေမယ့်လေ့လာလို့၇အောင် အလိမ်မခံ၇အောင် ဒါလေးတင်ပေးတာပါ။ အခုဖုန်းတွေမှာ...
လာရောက်လည်ပတ်ကြသော သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို ကျွန်တော် လှိုင်ဘွားအောင် ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်. Awesome Inc. theme. Theme images by molotovcoketail. Powered by Blogger.